China Mist Humidifier ho an'ny trano sy ny fampiasana manokana Manufacturing sy Factory | Kennedy
Mist Humidifier ho an'ny trano sy ny fampiasana manokana
FANAOVANA AIR MATA! TSY ATAOVY INTSONY ILAY MIST MIST HUMIDEFIER MAMPIASA INDRINDRA ETO AN-tsena! Te-hanafoana ny fijaliana vokatry ny vokatry ny rivotra maina? Tsy mila miady amin'ny humidifiers birao mora vidy sy mitete. Ity humidifier ultrasonic kalitao ity no tadiavinao. Mipoitra avy hatrany sy mahomby izany! - Mahatsiaro ho tsara kokoa ao anatin'ny minitra!
MIASA TAMIN'NY fahanginana tanteraka – matory toy ny zazakely! Tsy misy mitabataba, misioka, na mikitroka satria ity Humidifier an-trano iray maharitra ity dia mamoaka tsy mitsaha-mitombo ny zavona mangatsiaka mampitony irinao. TSARA kokoa ny matory, mifoka rivotra tsara kokoa, MIAINA tsara kokoa! Maniry anao hahita ity taona ity ianao!
FAMPIANARANA ZAVATRA MISY + 360 DEGREE ROTATING NOZZLE - Ity Humidifier ity dia noforonina ho anao ao an-tsainao. Ny tontolo iainanao, ny filanao ary ny safidinao! Namboarina miaraka amin'ny dial fanaraha-maso tena tsotra sy nozzle mihodina 360° mba hahafahanao mifehy sy mampifanaraka tanteraka ny fivoahan'ny zavona sy ny lalana mikoriana. AUTOMATIC SHUT OFF- Tsy mila mitaiza an'ity Humidifier ity. Fantatray fa te hanakatona an'ity ianao alohan'ny hifaranan'ny tanky... Matokia fa azonao atao ny mametraka sy manadino!
2.5L TANK-RANO LEHIBE – FILTER MAIMAIMPOANA- MISY WARRENTY MANDRAKIZAY! Namboarina tamin'ny tanky rano lehibe 2.5L mahavariana izay mitazona ny fanamafisam-peo amin'ny efitranonao amin'ny fikosehana mandritra ny 24 ora mahery amin'ny famenoana tokana! Natao sivana maimaim-poana ary naorina haharitra mandritra ny androm-piainany! Alaivo sary an-tsaina ny fiainana feno fahasambarana ho azonao amin’izany!
Ny endrika famenoana ambony dia mahatonga ny fanamafisam-drivotra ho mora fenoina sy voadio. Sokafy tsotra izao ny fonony ambony mba hampidirana rano madio mivantana amin'ny fitoeran-drano amin'ny alàlan'ny tampony misokatra malalaka. Tsy ilaina ny disassemble ny fitaovana mba hameno azy amin'ny rano. Fanamarihana: Alefaso azafady ny menaka manan-danja amin'ny peratra sponjy raha mila mankafy ny zavona sy ny hanitra miaraka.
Ataovy ny toetrandro ho an'izao tontolo izao
teo aloha: Pedestal fan, Oscillating Fans, Electric Fan, Adjustable Mijoro Fanorenana
Manaraka: mpankafy rechargeable avy amin'i Kennedy